प्रम भारत भ्रमणमा हुँदा डा. भट्टराइको यो ट्विटले देशभर तरङ्ग मच्चायो ! - pnpkhabar.com
You are at:Home»राजनीति»प्रम भारत भ्रमणमा हुँदा डा. भट्टराइको यो ट्विटले देशभर तरङ्ग मच्चायो !
प्रम भारत भ्रमणमा हुँदा डा. भट्टराइको यो ट्विटले देशभर तरङ्ग मच्चायो !
By रिता घिसिंग on २५ चैत्र २०७४, आईतवार ०५:५७ राजनीति
चैत २५, काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलि र भारतिय समकक्षी मोदिबिच काठमाण्डौ सम्म रेल र तेल पुर्याउने सहमतीप्रती बाबुराम भट्टराईले खुशी ब्यक्त गरेका छन ।
सामाजिक सन्जाल ट्विटरमा प्रतिकृया दिदै भट्टराईले भनेका छन्, प्रम केपी ओलि भ्रमणका उपलब्धी काठमाण्डौसम्म रेल र जेल मार्गका कुरा सकारात्मक छन ।
यस्ता सहमती ब्यबहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा भने भट्टराईको जोड छ ।
बिगतमा झै यो कुरा कुरामा मात्र सिमित नहोस, धान्नै नसकिने ब्यापार घाटा, सिमावर्ती डुबान समस्या, ईपिजिको कार्यक्षेत्र आदिबारेको मौनता चाही खड्कियो, भट्टराईले लेखेका छन ।
नेपाल र भारतबीच जलमार्ग, रेलमार्ग र कृषि क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तीनदिने भारत भ्रमणक्रममा शनिबार उक्त सहमति बनेको हो। भारतले यी सहमतिलाई ‘गेम चेन्जिङ’ सहयोग भनेको छ। तीन नयाँ महत्वपूर्ण सहयोगबारे नेपाल र भारतले शनिबार तीनवटा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। यस्तै दुवै देशले मूल विषयमा पनि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन्
। तीन नयाँ महत्वपूर्ण सहयोगका क्षेत्रबारे नेपाल र भारतले तीनवटा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा शनिबार नयाँदिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसमा सम्पन्न नेपाल–भारत द्विपक्षीय बैठकमा जलमार्ग, रेलमार्ग र कृषिक्षेत्रमा सहयोगको सहमति बनेको हो।
नेपाल र भारतबीच शनिबार भएका तीनवटा नयाँ सहमतिमा अन्तरदेशीय जलमार्गमार्फत नयाँ कनेक्टिभिटी (न्यु कनेक्टिभिटी थ्रु इनल्यान्ड वाटरवेज), कृषिका क्षेत्रमा नयाँ साझेदारी (न्यु पार्टनरसिप इन एग्रिकल्चर) र रक्सौल–काठमाडौं जोड्ने नयाँ रेलसेवा विस्तार रहेका छन्।
दुवै देशका तर्फबाट जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल–भारतबीचको कनेक्टिभिटीलाई विस्तार गर्ने उद्देश्यले रक्सौल–काठमाडौं विद्युतीय रेललाइन (मार्ग) निर्माण गर्ने सहमति गरिएको हो। सहमतिअनुसार रेललाइन भारतीय सहयोगमा निर्माण गरिनेछ। रेललाइन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सर्वेक्षण एक वर्षभित्र पूरा गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
त्यसपछि दुवै देशका पदाधिकारीले आपसी सहमतिमा लगानीको विधिसहित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्ने जनाइएको छ। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारत अन्तरदेशीय रेललिंक परियोजनाको पहिलो चरणमा भएको प्रगतिको प्रशंसा गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सन् २०१८ भित्र जयनगरदेखि जनकपुर, जोगबनी–विराटनगरसम्मको रेललिंक निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न दुवै प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन पनि दिएका छन्। दोस्रो चरणअन्तर्गत जलपाइगुडी–काँकडभिट्टा, नौतुना–भैरहवा र नेपालगन्ज रोड–नेपालगन्ज रेललिंक परियोजना अघि बढाइने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपाल र भारतबीच भएको दोस्रो सहमति हो– अन्तरदेशीय जलमार्गमार्फत नयाँ कनेक्टिभिटी।
यसले नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो सहयोग पु-याउने विश्वास लिइएको छ। कार्गो ओसारपसारका लागि जलमार्ग प्रयोग गरिने संयुक्त विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। व्यापार तथा पारवहन सम्झौताअनुसार भारतले नेपाललाई अन्तरदेशीय जलमार्गमार्फत नयाँ कनेक्टिभिटीको सुविधा दिने भएको हो।
‘यसले नेपाललाई समुद्रसँगको पहुँच प्रदान गर्नेछ। त्यसपछि कार्गो ओसारपसार सहज र सुलभ रुपमा हुनेछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। दुवै प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित अधिकारीलाई शनिबार नै यसका लागि आवश्यक मोडालिटी बनाउन निर्देशन दिएका छन्।
संयुक्त विज्ञप्तिमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिएको ‘सबैको साथ, सबैको विकास’ र ओलीले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नीति एकअर्काका परिपूरक भएको उल्लेख छ।
नेपालले तीनवटा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले दिएको बधाईलाई पनि संयुक्त विज्ञप्तिमा समेटिएको छ। यस्तै विज्ञप्तिमा नेपाल र भारतबीच भएका नयाँ तीनवटा सहमति पनि समेटिएको छ।
स्रोत : इअल नेपाल